Job vacancies | Asia Time Group of Companies ﻿
Yadanar St,Yadanar Housing, South Okkalapa Tsp, Yangon
One of the Dynamic and endeavor local owned Company founded in 2011. Asia Time Group of Companies covers various business sectors and Business services.
DTP Office Staff
၁။ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ ၂။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂ )နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ၃။ စာရင်းဇယားများအား Soft Copy, Hard Copy များအားထိန်းသိမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၄။ကွန်ပျုတာ၊ (Microsoft Word ,Excel,Page Maker,PhotoShop ...
Electrical System Travels & Tours Construction General Trading Food & Beverages Others
•	စတိုရွိပစၥည္းမ်ားအား စာရင္းအတိအက်ထိန္းသိမ္းနိင္သူျဖစ္ရမည္။
•	သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေအတြ႕အၾကဳံ (၂ )ႏြဈအထက္ရြိသူျဖဈ •	ၾကႏၸ္ုတာ၊ (Microsoft Word ,Excel) (Internet & Email )က်ျမ္းက္ျငၥာ အသုံး်ပုတတ္ရမည္။ •	လုပ္ငန္းစာရင္းဇယားမ္ားအား တိက္ေသခ္ာ ေစ့စပၼဴရြိၿပီး စာရင္းဇယားမ္ားအား ထိန္းသိမ္းနို ...
•	အစိုးရရုံးများသို့ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါကနယ်ညအိပ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွတ်စာတမ်းများအား S,copy/ H,copy ဖြင့်စေ့စပ်သေချာစွာ စီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုံးလ ...
•	Word, Excel, Power Point ကှမွးကငွှသူဖှဈရမညွ။ •	လဘော Law အကှောငွးနားလညသွူဖှဈရမညွ။ •	Construction လုပငွနွးတှငလွုပကွိုငဘွူးသူဦးစာပေးမညွ။
•	ကွန်ပျုတာ၊ (Microsoft Word ,Excel,Page Maker,PhotoShop ) (Internet & Email)ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ •	Auto Cad 2D (or) 3D ထိရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွတ်စာတမ်းများအား S,copy/ H,copy ဖြင့်စေ့စပ်သေချာစွာ စီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် အခြားသောအစိုးရလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းမျာ ...
•	Project တိုးတက်မှုသည်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတိုင်းရှိမရှိ လိုအပ်သလို လိုက်လံဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အစိုးရတင်ဒါဆိုဒ်များတွင်လုပ်ကိုင်ဘူးသူဖြစ်ရမည်။
•	အစိုးရတင်ဒါ နှင့် တီကော်တင်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ဘူးသူဖြစ်မည်။ •	ကုမ္ပဏီရှိ Project များအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Project တိုးတက်မှုသည်သက်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ လိုအပ� ...
•	Manage step by step switching of 10kv, 33kv D/S, LBS and VCB
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပီ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်အချိန် ၉:၃၀ မှ ၇:၀၀ ထိဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ •	ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ •	ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
M & E QS Engineer